‘दिल बेचारा’ फिल्मले रच्यो इतिहासमै ठूलो रेकर्ड - Sidha News
‘दिल बेचारा’ फिल्मले रच्यो इतिहासमै ठूलो रेकर्ड
काठमाडौं। स्व. सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम फिल्म `दिल बेचारा´ हिजो अर्थात् २४ जुलाईका दिल रिलिज भयो। फिल्म अनलाइन पेलेटफर्म डिज्नी प्लस हटस्टारमा रिलिज गरिएको थियो। फिल्म हेर्न सुशान्तका फ्यानहरू निकै नै उत्साहित भएर बसेका थिए।
जसै फिल्म रिलिज भयो, ठूलो सङ्ख्याले एकैसाथ हेर्न थाल्दा हटस्टारको सर्भर नै क्र्यास भयो। केही समयका लागि हटस्टारको सर्भरले नै काम गर्न छाड्यो। यो सबै फ्यानहरूले सुशान्तलाई दिएको माया नै थियो। फिल्मले दर्शक र समालोचकहरूबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। फिल्मलाई अत्याधिक रुचाइएको छ।
सुशान्तको अन्तिम फिल्म `दिल बेचाराले´ इतिहासमै ठूलो रेकर्ड राख्न सफल भएको छ। ईन्टरनेट मुभी डाटाबेस(आइएमडिबी)को तर्फबाट फिल्मले १० मा १० अंक अर्थात शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेर रेकर्ड बनाएको छ। हालसम्म कुनै पनि फिल्नलाई आइएमफिबीले शतप्रतिशत अंक दिएको थिएन।
सुशान्तको अन्तिम फिल्म नै आइएमडिबीको तर्फबाट शतप्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने इतिहासकै पहिलो फिल्म बन्न पुगेको छ। यद्यपि आइएमडिबीले केही समयपछि फिल्मलाई १० मा ९.८ अंक दिएको थियो। तर पनि यो अंक आफैमा निकै ठूलो मानिन्छ। आज सुशान्त बाँचिरहेका भए आफ्नो सफलता देखेर कत्ति खुसी हुन्थे होला!
सुशान्तको अन्तिम फिल्म `दिल बेचारा´मा सुशान्त सिंह र सञ्जना साङ्घीलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सकिन्छ। फिल्मले जिन्दगी जिउने तरिका सिकाएको छ।
बजारमा सामान किन्न गए १४ दिन क्वारन्टिनमा
‘पेरिसडाँडा पुगेर ठूला नेतालाई झापड हान्न
जुम्लाबाट गोबिन्द केसीलाई काठमाण्डौँ ल्याइयो
किन छुटाइए सागमा गौरवाशाली पदक जित्ने
महानायक राजेश हो भनेर आनन्दले सुत्नु राम्रो : दीपकराज गिरी
जसलाई डाइरेक्टरले नराम्री भनेर फिल्मबाट निकालेका थिए ! उसैले बलिउडमा गरिन् कमाल
यति महँगो मूल्यको गाडी चढेर हिड्छिन् सनी लियोनी
धादिंङका हिमेश पन्त बने पहिलो ‘कमेडी च्याम्पियन’
‘सेन्टी भाइरस’ उत्रियो, हलमा ‘आमा’ को दबदबा कायमै
जीवनसाथी रोज्दा छुटे एक असल साथी
नेपाल आइडलबाट बाहिरिए यी अर्का धुरन्धर (हेर्नुहोस भिडियो)
अमृत सापकोटाले आफ्नो एनिभर्सरीमा दिए श्रीमतीलाई नयाँ गित उपहार (हेर्नुस भिडियो सहित)